Yahoo! စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ... မင်းငါ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပြီ။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 27, 2007 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 27, 2007 Douglas Karr
Direct Mail သည်စျေးကြီးသောအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကစျေးကြီးတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖောက်သည်တွေကိုပြောပြီးသူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်မေးလ်ဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဟာသူတို့ရဲ့စာတိုက်ပုံးနှင့်အမှိုက်ပုံးအကြားအကွာအဝေးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါတယ် တိုက်ရိုက်မေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းမှာပစ်မှတ်ထက်ပိုအရေးကြီးပြီးအပိုင်းအစမှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။
ဒီနေ့မှာလှပစွာဖန်တီးထားတဲ့ Direct Mail အပိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် Yahoo! စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အချို့သောသော့ချက်စာလုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆီသို့ $ 75 အကြွေးဖြစ်ခဲ့သည် Yahoo က! ရှာဖွေရေးယန္တရား။ ငါရုံစတင်ကတည်းက ရေတပ်စစ်ပြန်များအတွက်လူမှုကွန်ယက်ငါသော့ချက်စာလုံးထိုးဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအချို့သောစမ်းသပ်မှုလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။
အကောင်းဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကသင်အကောင့်ထဲသို့ဒေါ်လာ ၃၀ ပြန်အမ်းရန်မလိုအပ်သည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သုံးစွဲနိုင်သောဒေါ်လာ ၄၅ တန်သောကလစ်များသာ ဖြစ်၍ ငါစာရင်းသွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါပြောတယ် ကြိုးစားခဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှားအယွင်းသတင်းစကားကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာအနည်းဆုံး ၄ ကြိမ်မကတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။
တိုက်ရိုက်မေးလ်သည်မည်သည့်ကြော်ငြာနှင့်မဆိုတူညီသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတံခါးဖွင့်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပို့ဆောင်နိုင်ရမည်။ မပို့နိုင်ခြင်းကကြော်ငြာကိုလုံးဝမထိခိုက်သည်ထက် ပို၍ ထိခိုက်စေသည်။ ငါသည်ဤ Yahoo ကမျှော်လင့်ပါတယ်! စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဆိုတာမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ရှေးရှေးလူအနည်းငယ်ဆီကိုပို့လိုက်တဲ့နမူနာကင်ပိန်းပါ။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ သူတို့ကျွန်တော့်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်! ၄ ကွိုးစားပွီးနောကျငါမပြန်ပါ
Yahoo! အများဆုံးဖွယ်ရှိဤတိုက်ရိုက်မေးလ်အပိုင်းအစအပေါ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စိတ်ကူးကောင်းသည့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအားညံ့ဖျင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်မှုကြောင့်ဟုအပြစ်တင်ခံရလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင် Yahoo! ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုဖို့ဖြစ်ပျက် 🙂
Tags: Actonကျောက်တံတားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကုမ္ပဏီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပံ့ပိုးပေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် ratingsစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အစီရင်ခံစာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းmultivariate စမ်းသပ်ခြင်းစာမျက်နှာစမ်းသပ်ခြင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်
Logos နှင့်ပျော်စရာ…ကော်ဖီဆိုင်များ Indy
နိုဝင်ဘာလ 27 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 10:37 နာရီ
ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဒီလိုအရာတွေကို ဖောက်ပြန်တဲ့အခါ အမြဲတမ်း အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ မင်းသူတို့ကို အခွင့်အရေးလေးခုပေးလိုက်တာ ကံကောင်းလိုက်တာ၊ လူအများစုက ပထမအကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ဒုတိယ အကြိမ် ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်။ ဤကဲ့သို့သောအမှားတစ်ခုလုပ်မိပါက "လူသေးလေး" အတွက် ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒုတိယအခွင့်အရေးကို ပေးခဲပါသည်။
28:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 59
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် Direct Mail က မှန်ကန်စွာ မလုပ်ဆောင်မှသာ ဈေးကြီးပါတယ်။ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာနိုင်သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကဲ့သို့ စျေးသက်သာခြင်း/အခမဲ့အရာများထက် ငွေပိုမိုကုန်ကျနိုင်သော်လည်း ပိုမိုအောင်မြင်လေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် တိုင်းတာနိုင်သော၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ရေဒီယို သို့မဟုတ် တီဗွီကြည့်ရအောင်။ (ဒါဆို DM က ကျွမ်းကျင်သူက ပြောတာ။
နိုဝင်ဘာလ 28 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 12:47 နာရီ
ကျွန်တော်သဘောတူသည်! 'စျေးကြီးတယ်' ဆိုတာထက် 'သိသာထင်ရှားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု' ကို ပြောသင့်တယ်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီး ဝင်ငွေများစွာရရှိရန် ကူညီပေးသောအခါတွင် ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်မဟုတ်ပါ။ ဟယ်၊ ငါအဆင်သင့်ပါပဲ၊ ဆန္ဒရှိပြီး ဒီအပိုင်းကို တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်။
29:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 54
မှတ်ချက်ကောင်းများ။ Yahoo ၏ မားကတ်တင်းအဖွဲ့သည် မကြာသေးမီက စတင်လုပ်ဆောင်သူများနှင့် ပြိုင်ဘက်များထံ ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးလူများစွာကို ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂုရုတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jay Abraham က သူ့ကိုဖုန်းဆက်သင့်တယ်လို့ အမြဲထင်ခဲ့တယ်။